Aqalka Sare oo laga yaabo inuu maanta fasiraad ka bixiyo hakintiisa xiriirka Golaha Shacabka – Kalfadhi
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare ayaa lagu wadaa iney maanta kulan ku yeeshaan xaruntooda Muqdisho. Si rasmiya looma ogaan ilaa iyo hadda ajandaha kulanka Golaha, balse waxaa loo maleynayaa iney fasiraad uga bixin doonaan hakintii uu Goluhu ku sameeyey wada-shaqeyntii kala dhaxeysay Golaha Shacabka, sida ay Sanataro ka tirsan Golaha u sheegeen Kalfadhi.
Sidoo kale, Golaha oo ku jira waqtiyadiisii ugu dambeeyey ee Kalfadhiga 4-aad, waxaa horyaala shaqooyin fara badan, oo ay ka mid yihiin muddeynta kulamada ay Xubnaha Aqalka Sare uga doodayaan ama ku meel-marinayaan Hindise Sharciyeedyada ag yaala ee mar hore ka soo gudbay Golaha Shacabka uu sheegay inuu joojiyey wada-shaqeyntii uu la lahaa.
Kulanka Golaha, oo lagu wado inuu furmo Duhurka ka hor, ayuu Kalfadhi helayaa in ay goobta kusii qulqulayaan Xildhibaanno ka tirsan Aqalka iyo Suxufiyiin looga yeeray goobta, si ay u baahiyaan waxa ka soo baxa isu-imaatinka Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare.
Kalfadhi ayaa sida ugu dhaqsiyaha badan kuugu soo gudbin doona waxa looga hadlayo ama ka soo baxa kulankaas uu maanta xarutiisa ku yeelanayo Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare ee ku xirnow.
Madaxweyne Gaas oo ku taliyey in Doorasha uu musharraxa u yahay ay u dhacdo si cadaalad ah